PISAREMA 16 zvinoreva vhesi nendima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero PISAREMA 16 zvinoreva vhesi nendima
PISAREMA 16 zvinoreva vhesi nendima
Nhasi tichave tichiongorora Mapisarema 16 zvichireva ndima nendima. Iri bhuku rePisarema, kufanana nemamwe akawanda mabhuku ePisarema, rakanyorwa naMambo Dhavhidhi, Mambo mukurusa munyika yeIsrael. Murume aive nemukurumbira anozivikanwa semurume wepamoyo paMwari chaipo. Vazhinji vanodana Mapisarema 16 ndima yendarama. Zvinoratidza kuti David akawana hupenyu muna Mwari mumwe wechokwadi. Chakavanzika apa kutenda muna Mwari mumwe wechokwadi. Pisarema rinotsanangura Mwari semuchengeti wedu; anotichengeta Nenzira isingagone kuitwa nemunhu. Iri Pisarema rinogona kushandurwa kutsvaga kupotera muna Mwari.
Zvakare, munguva dzekutambudzika, Mapisarema 16 anoshanda senzira yekupa tariro kune vakatendeka. Sezvo takamisa kukosha kwerugwaro, zvakanaka kuti isu titsanangure zvinorehwa nendima imwe neimwe
Mavhesi 1-3 Ndichengetei, Mwari, nekuti ndinovimba nemi. Iwe mweya wangu, wakati kuna She, "Ndimi Ishe wangu," kunaka kwangu hakuna kukuvarairwa;
Mambo David pamwe akanyora iro Mapisarema paaive mumatambudziko, uye aida Mwari kuti amuchengetedze. Anofanira kunge ainetseka, uye akatenda kuti aigona chete kuisa kuvimba nekuvimba kwake kuna Mwari wemasimbaose kuti amuponese. Patinenge tichirwadziwa kana patinoda kubatsirwa, ndima idzi dzinobatsira. Mambo David akavimba Mwari uye vachiri kuwana nzira yekumurumbidza nayo kunyangwe aive apererwa. Kana tichienda nematambudziko kana Dhiabhori achiedza kushandisa zvinhu zvepasirese kuti atiburusire muchivi, tinogona kushandisa iyi Pisarema kukumbira Mwari rubatsiro kuna Mwari kuti atidzivirire kubva pazvinhu zvinowisa pasi pano uye tirege isu titakurwe. Mavhesi aya akatiratidza kuti kana tiri mumatambudziko, tinofanira kuvimba naMwari uye kwete kumuramba, asi isu tinofanirwa kumubvuma nguva dzese mune zvese zvatinoita, kunyangwe Mambo David nemufaro vakadana Mwari saIshe wake. Mambo David vaingoziva chete kana iye aine Mwari padivi pake anogona kufambira mberi, ndipo paanogona kuva nechimwe chinhu. Aiziva pasina Mwari, hapana chakanaka chaigona kubuda maari. Nenzira iyi, vhesi 2b iri kutirayira kuti titende nguva dzose kuti tirege kutenda kuti hakuna chinhu chingaitwe pasina Mwari kuti vataure mazviri. Zvinogona chete kuitika kana Mwari akazvitendera. Achitaura nezvevatsvene vari pasi, David akafadzwa kuti vanovimba zita raIshe uye vanotenda ndiye Mwari mumwechete wechokwadi. Uku zvakare kudanwa kuti tide Ishe uye zvakare tide avo vanoda Mwari.
Ndima 4-6. Asi kune vatsvene vari mupasi uye kune vakanakisa, wandinofarira kwazvo. Kurwadziwa kwavo kuchawedzerwa, vanokurumidza mumwe mwari; handingapi zvipiriso zvavo zvinonwiwa zveropa, kana kutora mazita avo. Mumiromo yangu. Jehovha ndiye mugove wenhaka yangu uye mukombe wangu. Munochengetedza mijenya yangu: Mitsara inowira kwandiri munzvimbo dzakanaka; zvirokwazvo, nhaka yangu yakafa.
Aya mavhesi akataura kukosha kwekushandira Mwari mumwechete wechokwadi. Vanonamata zvifananidzo havangaonekwi pamberi paMwari. Nhamo, nenhamo, nedambudziko revanoshandira vamwe vamwari zvichawanda. Mambo David aiziva kukosha kwekushandira Mwari wechokwadi; aiziva zvazvinoda kuteerera Mwari uyezve nehasha dzakamirira avo vasingazotya Ishe.
Mambo David akararama hupenyu hwake kuna Mwari. Mavhesi aya anogona kushandiswa kuparidza chokwadi cheVhangeri, chinova Kristu kuvanhu kuti Vamugamuchire uye vatende muzvinhu zvikuru uye zvine simba Iye zvaachaita. Zvinodavirwa nevahedheni hazvina kukodzera kutevedzera zvichienzaniswa nemirairo yaKristu. Mukuenderera mberi kuraira vasingatendi, zvibayiro zvisina basa zvavanogadzira zvinogona kunongedzerwa kwavari semaitiro asina maturo. Ndima yekupedzisira inoratidza kuti Mwari inhaka yedu. Inotsanangura zvakanakira kutenda Mwari mumwe chete wechokwadi. Mavhesi aya anotsanangurazve kuti isu tinofanirwa kuwana nyaradzo munaIshe. Mwari havazombotikomborera chete. Achaita kuti chimwe nechimwe chezviitwa zvedu chibudirire sezvaakataura kuti mitsetse inowira munzvimbo dzinonakidzwa imi, uye akativimbisawo kutipa nhaka yakanaka. Mwari akatiitira isu tese vimbiso, uye isu tinofanira kuomerera pakutenda kwedu uye titende kuti chero zvingaitika, makomborero ake anogara aine chokwadi. Kutenda muna Mwari mumwechete kune zvakunakira asi kune avo chete vanovimba naye, vanomugamuchira, uye vakagadzirira kupa zvese zvavo kwaari.
Verse 7-8 Ndicharumbidza Jehovha, akandipa zano; itsvo dzangu dzinondidzidzisa panguva dzousiku. Ndakaisa Ishe pamberi pangu nguva dzose; nekuti uri kuruoko rwangu rworudyi, handingazununguswi.
Kana rutendo rwedu rukatanga kukundikana, mavhesi aya anogona kutibatsira kubatirira kuna Mwari takasimba. Zvinotibatsira kuti tinzwisise kuti vamwari havagone kutibatsira; uye havagoni kupa chero rubatsiro. Mwari ndiye mubatsiri wedu panguva yenhamo uye munguva dzekushayiwa. Kana tichida kutungamirirwa naMwari, Mwari anogara achiwanikwa. Anogara achiwanikwa, akagadzirira kupa mazano. Iri Pisarema rinonyanya kushandurwa senzira yekuzviraira pachedu patinonzwa sekunge tinogona kudzokera shure chero nguva kana hanya ikasatorwa Izvi zvinotibatsira kuteerera kuraira kwaMwari nemirairo. Izvi zvinotibatsira kukura kutenda kwedu uye kudzosa hukama hwedu naMwari. Zvinotibatsira kuti tinzwisise kukosha kwemunamato uye nekumirira kuna Ishe sezvo avo chete vanomirira Mwari vacharatidza zvinhu zvikuru uye zvine simba. Tinofanira kugara tichitenda kuti Mwari ari kwatiri. Achiri nesu sezvo ndima yekupedzisira ichiti Ari kuruoko rwangu rwerudyi, Ini handizoendeswa.
Ndima 9-11 Naizvozvo, moyo wangu unofara, kubwinya kwangu kunofarisisa: Nyama yangu ichazorora mutariro. Nekuti haungasii mweya wangu mugehena; Hamungatenderi Iye kuti aone kuora. Ndiratidzei nzira yeupenyu; Mufaro wake uzere nemwi. kuruoko rwenyu rworudyi, mune zvinofadza narinhi.
Zvakanakira vatendi vanowana muna Mwari hazvigumi. Nekudaro kudiwa kwekugara tichirumbidza Mwari. Ndima dzekupedzisira dzePisarema rino dzinoratidza mabhenefiti aMwari asingagumi; Naizvozvo, Mwari anofanira kudomwa. Avo vanovimba Mwari vanowana rugare, mufaro, mufaro, kubwinya, hupenyu husingaperi. Haazoite kuti vakarurama vatambure sekuvimbisa kwavakaita nguva dzose kuva nemisana yedu. Izvo zvasara kuti isu tibatisise kuvimbiso yake sevatendi, kuvimba maari, uye nekutya kwake matiri. Avo vanoziva kukosha kwekushandira Mwari havangomugamuchire chete nechitarisiko chavo chekunze asiwo nepfungwa dzemukati. Sevatendi, tinofanira kuteerera Mwari nguva dzose, uye zvisinei kuti dambudziko nderei, tinofanira kuziva kuti pamberi pake pane mufaro wakazara. Anotiratidza zvinhu zvikuru uye zvine simba zvatisingazivi. Panzvimbo pedu kuti titambudzika, isu tinofanirwa kuvimba naMwari, kugara tichifara, uye nekuvimba kwakazara muna Mwari.
NEI NDODA KUTI NDODA IYO CHEMA
Pese patinofanira kurumbidza Mwari nekuda kwekunaka uye mutsa wake
Chero simba redu parinotanga kutikanganisa, uye tinoda mazwi ekurudziro.
Kana tichida chiyeuchidzo chenguva dzose kuti Mwari ndiye kwatiri uye ane mabhenefiti makuru kwatiri
Patinoda kurairwa uye kutungamirirwa
Kana tichida kuti Mwari vataure nesu
Mwari ndibatsirei kuti ndikugamuchirei soMuponesi wangu uye Mudzikunuri
Ishe Mwari, batsirai kutenda kwangu mauri kusambopera.
Ndibatsire kuti ndive nekushingairira iwe, moto unopfuta usingadzimwi
Ishe, ndibatsirei kuti ndirege kupotsa zvipikirwa zvangu
Ishe, ndibatsirei nguva dzose kuvimba nemi uye kumirira imi.
Previous nyayaPISAREMA 7 zvinoreva vhesi nendima
inoteveraPSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE
Kunamata Points YeMweya weKuteerera
Minamato Yevabereki Uye Vana